मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,कार्तिक ०३ गते बुधबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल – Annapurna Daily
On Oct 19, 2021 367
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्ने समय छ । ईर्ष्या गर्नेहरूको मनोबल कमजोर हुनेछ । प्रयत्न गर्दा अप्ठ्यारा काम पनि सम्पादन हुन सक्छन् । रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द पाइएला । पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) अध्ययनमा राम्रो प्रगति हुनेछ । हिम्मतले काम लिनुहोला, आफ्नै प्रतिभाले फाइदा दिलाउनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । मनग्य धन आर्जन हुनेछ । बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त हुनेछन् । आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ । परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ । वैदेशिक कामकाजमा फाइदा होला । मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुने योग छ । टाढाको यात्रा गर्ने मौका छ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) मेहनत गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ । हिम्मतले काम बनाउन सकिनेछ । केही खर्च लाग्ने तर पनि सोचेको काम बन्ने योग छ । व्यवसायमा थप लगानी बढाउन सकिनेछ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) अनावश्यक दौडधुपमा समय बित्नेछ । फाइदाका लागि योजनाहरू गोप्य राख्न आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक कारोबारमा सजगता अपनाउनु होला । दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिनेछ । पति पत्नीबीच घर सल्लाह नमिल्न सक्छ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिनेछ । दीर्घकालसम्म फाइदा हुने काममा हात हाल्ने समय छ । तार्किक क्षमताले सम्मान दिलाउनेछ । लाभ हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । साझेदारीमा पनि फाइदा हुनेछ । आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) काम देखाएर विशेष उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ । गुरुजनको सहयोग जुट्नेछ । व्यवसायमूलक काममा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ । व्यापार ब्यवसायमा फाइदा हुनेछ । आम्दानी बढ्नाले परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन् ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) प्रतिस्पर्धीहरूबाट सजग रहनुहोला । पहिलेका कर्मको प्रतिफल पाइनेछ साथै कामको चापबाट पनि फुर्सद पाइनेछ । फाइदाका पछि लाग्दा साथीभाइसँग असमझदारी बढ्न सक्छ । खर्च बढ्नुका साथै आर्थिक अभाव समेत देखा पर्नेछ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) बोलीको भरमा काम सम्पादन हुने योग छ । सुन्दर पहिरनमा रमाउँदै व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । अधिकारका लागि केही संघर्ष हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गरे पनि अरूको हातमा गइसकेको अवसर जोगाउन सकिनेछ ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने उत्साहजनक समाचारले मन प्रसन्न हुनेछ । सन्तानका माध्यमबाट पनि काम बन्ने सम्भावना छ । गरिएका कामको राम्रै मूल्यांकन हुनेछ । विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्नेछन् र प्रसन्नता मिल्नेछ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) सहयोगीहरूले विपक्षीलाई साथ दिनाले काममा चुनौती देखिएलान् । आर्जित धन खर्च हुन सक्छ । तर आफ्नै प्रयासले लाभ मिल्न सक्छ । विभिन्न अवसरले पछ्याउने छन् । भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ । व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) पुरानो समस्याले केही झमेला आइलाग्न सक्छ । दाम्पत्यमा शंका र असमझदारी बढ्ने समय छ । परिस्थिति अनुसार चल्न नसक्ता दुःख पाइनेछ । काम बिग्रने डरले सताइरहनेछ । बेसुरमा बचन दिनाले दुःख पाइनेछ । पशु र कृषिबाट सोचेको लाभ नउठ्न सक्छ ।
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,मंसिर ११ गते शनिबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,मंसिर १० गते शुक्रबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,मंसिर ०९ गते बिहिबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
पिरो खानेकुराका छन् यति धेरै फाइदा, गर्छ रिसलाई नियन्त्रण
तपाइँलाई डाइबेटिजको समस्या छ ? उपचारमा यो फल मानिन्छ वरदान ! यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,मंसिर ०८ गते बुधबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
जाडो महिनामा बिहानै खानुस् यी खानेकुरा, स्वस्थ रहन्छ शरीर
मुक्तिनाथ बाबाले हामी सबैको रक्षा गरुन,कार्तिक १५ गते सोमबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल